Xoghayaha Dawladda Hoose Ee Laascaanood Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Wiil Yar Oo Saddex Qoys Isku Haystaan | Berberatoday.com
Xoghayaha Dawladda Hoose Ee Laascaanood Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Wiil Yar Oo Saddex Qoys Isku Haystaan
Laascaanood(Berberatoday.com)-Maxkamadda degmada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa waxaa Axadii todobaadkan ka furantay dacwadda wiil yar oo ay isku haystaan saddex qoys oo degan magaaladda Laascaanood. Wiilkan yar oo da’diisa lagu sheegay intay tahay 12-jir, ayaa muddo saddex bilood ah waxaa gacanta ku hayay xog-hayaha dawladda hoose ee degmadda Laascaanood Cabdi Khayre Dirir, oo uu gurigiisa ku noolaa, hase yeeshee horaantii bishan ay siyaabo kala duwan u sheegteen saddex qoys oo wada degan Laascaanood.
Cabdi Khayre Dirir, xoghayaha dawladda hoose ee Laascaanood ayaa arrinta wiilkaasi yar ee ay saddexda qoys isku haystaan xalay uga waramay wargeyska DAWAN, isagoo ku sugan magaaladda Laascaanood. waxaanu sheegay in dacwada saddexda qoys ee sheeganaya ilmahan yar ay todobkii hore ka bilaabantay maxkamadda degmada Laascaanood. Xoghayaha dawladda hoose ee magaaladda Laascaanood Cabdi Khayre Dirir, ayaa ka waramay xaaladda wiil yar oo uu muddo dhawr bilood ah, iyadoo ay dhawaan saddex qoys oo degan magaaladda Laascaanood mid waliba uu isagu sheeganayo.
Cabdi Khayre Dirir, oo xalay khadka telefoonka ugu waramay Dawan, isagoo joogay magaaladda Laascaanood ayaa Isagoo ka waramayay goortii uu wiilkaasi yar helay, mudadda uu hayay iyo wakhtiga ay saddexdan qoys sheegteen, waxa uu yidhi “Sanadkii hore bishii 11-aad, 8-dii ayaan wiilkan yar helnay, goor subaxnimo ah oo ay saacadu ku beegnayd 10: subaxnimo ayuu gaadhi NOA ah oo uu ka soo raacay Garoowe kaga degay Laascaanood. Kadibna markii uu yimid magaaladda, hooyaday-baa magaaladda ku nool oo Madhiibaan ayaan ahay iyo wax noocaas ah ayuu sheegtay, kadib wuxuu yimid saldhig boolis oo ku yaala Laascaanood oo la yidhaahdo saldhiga Wadnaha, wuxuuna yidhi Garoowe ayaan ka imid, Aabo iyo Hooyo mid-naba ma lihi, oo xeryaha booliska Puntland ayaan ku noolaan jiray. Kadibna danbi-baadhihii saldhiga ayaa aniga ila soo hadlay, wuxuuna igu yidhi ilmo yar oo Ambad ah ayaanu haynaa, ii keenna ayaanan ku idhi, waana la ii keenay”.
“Maxkamadda degmadda ayaananu war-gelinay waanay waraysatay, waxaanu yidhi wiilkii yaraa, hooyo iyo aabo iyo cid idhashay haba yaraatee garan maayo, waxaanan ku garaadsaday anigoo Gaalkacayo jooga oo nin budhcad-badeed ahaa oo dhintay uu I haysto, markii uu ninkii budhcad-badeeda ahaa dhintayna dawladda hoose ee Gaalkacayo ayaa ila wareegtay, halkaas ayaanan ku noolaan jiray. Markii danbena xero-bilays oo Gaalkacayo ah ayaan ku noolaan jiray, markii danbena waan ka imid oo xerada booliska Puntland ee magaaladda Burtinle ayaan ku noolaan jiray, aakhirkiina waxaan ku noolaa xerada qaybta booliska ee Garoowe, kadibna sidaas ayaan kaga imid” ayuu yidhi Cabdi Khayre.
Xoghayaha dawlada hoose ee Laascaanood oo hadalkiisa sii watay, waxa uu yidhi “Kadibna waxaa la waydiiyay maxaad uga timid Garoowe? Waxaanu yidhi wiilkii yaraa, nin meesha joogay ayaa wax igu dhuftay, anna waan isaga soo cararay, sidaas ayaanan uga imid. Waxaa la waydiiyay hadda diyaar ma u tahay in aad ku laabato meeshii aad ka timid? Maya ayuu yidhi, ee halkan ayaan iska joogayaa. Magaaladda Garoowe cid ma ka garanaysaa raggii askarta ahaa ayaa la waydiiyay? haa nin ayaan ka garanaa ayuu yidhi, telefoonkiisa ayuu na siiyay. Qolada maxkamada ayaa ninkii la hadashay, ninkiina wuxuu yidhi ilmahaa yari waa inan Soomaaliyeed, cid idinka xigtaana ma jirto, ciidanka ayaanu iskala noolaan jiray, aabihii iiyo hooyadiina garan mayno, markaa haya inta cidiisa la helayo, ayuu maxkamadda ku yidhi ninkii.” “Kadibna Maxkamaddu go’aan ayay markaa gaadhay waxaanay si sharci ah ugu wareejisay wiilkii yaraa anigoo ah xoghayaha fulinta dawlada hoose ee Laascaanood, in aan gacanta ku hayo inta la helayo cid sheegato, sidaas ayaanan anigu ku hayay bishii 11-aad iyo 12-aad ee sanadkii u hore iyo bishii 1-aad iyo bishan dhamaadka ah ee aynu ku jirno. Afarta bilood ayaan hada wiilkan yar gacanta ku hayaa.
Mudadana qoyskayga ayuu kula nool yahay Laascaanood xanaanadiisa, daryeelkiisa, ilaalintaasi iyo culayskiisuba aniga ayay I saaran tahay. Waana da’da 12 jirka. Dad badan ayaan raadiyay oo ninkan yar garta, oo aan Gaalkacayo ka raadiyay, nin sarkaal ah oo ka tirsan ciidanka Puntland oo markii hore Gaalkacyo joogi jiray, imikana Garoowe jooga ayaan helay, ninkaasina wuxuu I siiyay xog ah in uu wiilkan yar markii u horaysay ku arkay Gaalkacayo isagoo ku noolaa sanadkii 2011. dad kale iyo meel kalena aanu garanaynin”.
Cabdi Khayre Dirir, waxa uu intaasi ku daray (Sidaas ayaan anigu afar cisho ka hor ugu soo bandhigay warbaahinta iyo facebook. Markaa mudadii saddexda bilood ahayd ee aan hayay, cid ilmahaas yar sheegatay ama ii timid maan arag. Bishan aan ku jirno horaanteedii ayaa saddex qolo oo reer Laascaanood ah ayaa qolo waliba dhinaceeda u sheegatay, qolo waliba waxay leedahay anagaa dhalnay, saddex jir ayuu nagaga lumay, lix jir ayuu nagaga lumay, calaamadahan ayuu noo lahaa, buuq fara badan ayay nagu abuureen.
Maxkamadda degmadda Laascaanood ayaa imika Kiiskii gacanta ku haysa, oo u furtay 3-da qoys ee reer Laascaanood, oo aanu hadda haynaa wax ku andacoonaya wiilkan yar. Maxkamadu waxay furtay uun gal-dacwadeedyadii, iyo wixii cadaymo iyo qoraallo ah ee ay qoysasku soo gudbisteen.”
Xoghayaha dawladda hoose ee Laascaanood ayaa sheegay inuu ku wareejinayo dhinacii ay maxkamadu si sharci ah ugu xukunto, Waxaanu ugu baaqay hay’adaha dawliga ah, kuwa madaxa banaan iyo cid kasta oo arrinta ilmahaasi ka caawin karta inay gacan ka siiyaan sidii eheladiisii loogu heli lahaa.
“Annigu waxaan ku wareejinayaa oo keliya, oo aan ku qancayaa cid kasta oo uu sharcigu sida sharciga ah ugu xukumo, qofkii sifo sharci ah ku hela diyaar baan u ahay in aan siiyo. Laakiin cid aan iskaga wareejinayo uun ma jirto. Waxaanan ka codsanaynaa cid kasta oo naga caawin karta hawshaasi, haddii ay tahay hay’adaha dawliga ah iyo kuwa madaxa banaanba in ay qayb ka qaataan sidii wiilkaasi yar loogu heli lahaa eheladiisii”ayuu yidhi Cabdi Khayre Dirir.